"High nemazvo" hazvipatsanurike kubva kune servo mota
Servo mota injini inodzora mashandiro ezvimakanika zvikamu mune servo system. Iyo inobatsira mota mota isina kunangana yekufambisa. Iyo servo mota inogona kudzora kumhanya, iko kurongeka kwakarurama chaizvo, inogona kushandura iyo voltage chiratidzo mu torque uye nekumhanyisa kutyaira chinhu chekutonga. Servo mota rotor kumhanya inodzorwa neyakaiswa chiratidzo, uye inogona kupindura nekukurumidza, mune otomatiki yekudzvanya sisitimu, seyakakwira chikamu, uye ine diki electromechanical nguva inogara, yakakwira linearity, kutanga voltage uye mamwe maitiro, iyo inogamuchirwa magetsi chiratidzo inogona inoshandurwa ikava mota shaft angular kusuduruka kana angular kumhanya kuburitsa. Inogona kuve yakakamurwa kuita dc servo motors uye ac servo motors. Hunhu hwayo hukuru ndewekuti kana chiratidzo chemagetsi chiri zero, hapana chinotenderera chinoitika, uye kumhanya kunodzikira nekuwedzera kwetorque.
Servo motors anoshandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana siyana masystem masisitimu, ayo anogona kushandura iyo yekuisa voltage chiratidzo mukati meanogadzira kuburitsa kwemota shaft uye kudhonza izvo zvinodzorwa zvikamu kuti uwane chinangwa chekutonga.
Kune dc uye ac servo motors; Yekutanga servo mota ndeye general dc mota, mukutonga kwekururamisa haina kukwirira, iko kushandiswa kweiyo yakazara dc mota kuita iyo servo mota. Iyo yazvino dc servo mota ndeye-yepasi-simba dc mota mune chimiro, uye kunakidzwa kwayo kunonyanya kudzorwa nezvombo uye nemagineti munda, asi kazhinji armature kudzora.
Kupatsanurwa kwemota inotenderera, dc servo mota mune echimakanika hunhu inogona kusangana nezvinodiwa zvecontrol system, asi nekuda kwekuvapo kwemutyairi, pane zvakawanda zvikanganiso: commutator uye bhurasho pakati peiri nyore kuburitsa sparks, chipingaidzo mutyairi basa, haigone kushandiswa mune gasi rinopfuta moto; Kune kukakavadzana pakati pebrashi uye mutengesi, zvichikonzera nzvimbo yakakura yakafa.
Chimiro ichi chakaoma uye kugadzirisa kwakaoma.
Ac servo mota inonyanya kuita maviri-chikamu asynchronous mota, uye kune kazhinji nzira nhatu dzekudzora: amplitude kudzora, chikamu kudzora uye amplitude kutonga.
Muzhinji, iyo servo mota inoda kuti mota inomhanya kuti itungamirirwe neiyo magetsi chiratidzo; Iko kutenderera kumhanya kunogona kuchinja nekuenderera pamwe neshanduko yemagetsi chiratidzo. Mhinduro yemota inofanira kukurumidza, vhoriyamu inofanira kunge iri diki, simba rekutonga rinofanira kunge riri diki. Servo motors anonyanya kushandiswa mune akasiyana mafambiro ekudzora masisitimu, kunyanya iyo servo system.
Jenareta Rotor Core, Motokari Stator, Stator Lamination Kuputira, Rotor Stator, Rotor Stator tsikwa, Stator Rotor tsikwa, Zvese Zvigadzirwa